Global Voices teny Malagasy · 7 Febroary 2011
07 Febroary 2011
Tantara tamin'ny 07 Febroary 2011
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana07 Febroary 2011
Ireo tehina, ganagana , fatim-biby, soavaly, famelezana sy ny dihy dia samy manana zavatra iombonana: samy singa ampiasaina amin'ireo fanatanjahantenam-pirenena eran-tany izy ireo. Ireo horonantsary androany dia mampiseho antsika sombintsombiny mikasika ireo fanatanjahantena sy lalao izay lalaovin'ny olona any amin'ireo faritra samy hafa eran-tany.
Ejipta: Miarahaba Firenena Iray Vaovao
Manonofy hoavy tsaratsara kokoa ry zareo Ejiptiana, ary ho an'ny maro dia efa an-dalam-pahatanterahana izany nofinofy izany.Ao anatin'ity lahatsoratra ity, rentsika avy amin'ireo Ejiptiana mpitoraka bilaogy ny fahatsapana ho toy ny mahita fahaterahana firenena vaovao, dia ny firenena izay nandrasan-dry zareo hatry ny ela.
Amerika Latina07 Febroary 2011
Nandritra ny fampakarambady iray natao tany amin'ny Repoblika Dominikana, nisy vondron'olona Venezoelana nahitàna valan'aretina Kôlera taorian'ny fihinanana sakafo voaloton'io aretina io. Raha 13 ireo trangatamin'ny voalohany dia nitombo be izany tao anatin'ny andro vitsy monja; ireo tatitra farany dia miresaka ny olona 135 efa nahazo fitsaboana noho ity Kôlera ity.
Raha miditra indrindra amin'ny andro faha-12 ny hetsika ao Ejipta, manomboka mihakivy ny sasany, saingy ny hafa kosa mbola manana fanantenana betsaka ny amin'ny hahitam-bokatra tsara. Ao anatin'ity lahatsoratra ity, mizara ny nofinofin'ireo Ejiptiana izahay.